कति को बास मा तार र यसलाई अन्य stringed साधन भिन्न कसरी?
Stringed साधन सम्पूर्ण अर्केस्ट्रा जग सकिन्छ। ध्वनि को एक विस्तृत श्रृंखला संग - कम बास देखि उच्च भाइलिन टिप्पणीहरू गर्न सुनिन्छ - अन्त मा उनि सबै एक मा बुना छन्। को अर्केस्ट्रा मा stringed साधन संख्या सबै बाँकी भन्दा धेरै छ, र कुल को बारेमा 2/3 बनेको छ। यस समूहमा अपरिहार्य भएको बास छ। यो उपकरण र कसरी धेरै तार बास मा के छ, हामी यस लेखमा वर्णन।
तपाईं बास कसरी धेरै तार पत्ता अघि, हामी के देखो। डबल बास उचाइ -2मीटर। यो भाइलिन को 3.5 पटक लम्बाइ छ। उहाँले एक विशेष एसपायर मा भुइँमा राखिएको छ। यस्तो उचाइ कि उपकरण यो सिर्फ खडा वा उच्च कुर्सी बसिरहेका प्ले गर्न सक्नुहुन्छ कारण। अन्य stringed उपकरण, यो छ गर्न यसको विपरीत, यसको फारम सन्दर्भमा , काँध sloping , घाँटी गर्न tapering यो पुरानो भोयला जस्तो बनाउन। बास लगभग 300 वर्ष पहिले देखा, र एक इटालियन Mykolo Tadino द्वारा आविष्कार भएको थियो।
बास, फोटो जो तल, ध्वनि मा देख्न सक्नुहुन्छ - सबै stringed साधन कम। आफ्नो आवाज बाक्लो र नरम रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन। यस मामला मा, माथि तनाव र पनि केही तेज ध्वनि सिर्जना गर्न टिप्पणी। तंग पर्याप्त ध्वनि कम। fourths मा रूपबाट बास, यो अन्य stringed साधन भिन्न हुन्छ। सीमा बास विशाल, त्यसैले यसलाई ensembles र orchestras, ओपेरा र ज्याज रचनाहरूको मा प्रयोग गरिन्छ। यो एक बास साधन रूपमा व्यापक लोकप्रियता बताउँछन्। यी उपकरण प्रथम वर्ग र दोस्रो वर्ग शिक्षा प्रशिक्षण, एकल विभाजित छन्। यो जुदाई बास मा तार को संख्या निर्भर र उपकरण आयाम देखि गर्दैन। तपाईं पनि एक व्यापक ध्वनि दायरा संग पाँच-स्ट्रिङ साधन पूरा गर्न सक्छन्। यहाँ मुख्य प्रश्नको जवाफ हो - बास मा तार कति? त्यहाँ 4-स्ट्रिङ साधन हो, 5-स्ट्रिङ basses पनि छन्।
यो साधन पर्याप्त ठूलो आकार भएकोले यसको यातायात समस्या उत्पन्न हुन सक्छ संग त। आखिर, तपाईं देख्न, आफ्नो हात अन्तर्गत उहाँले ग्रस्त छैन, र तपाईंले झोला राख्नु हुँदैन। साथै, जब तपाईं सार्न यो आवश्यक छ, यस्तो चिस्यान र तापमान रूपमा कारक जो पनि adversely को साधन असर गर्न सक्छ विचार छ। तसर्थ, यो सिर्फ ओसारपसार गर्न विशेष अवस्थामा विकास गरिएको छ।
मेरिना Berezhnaya: एक सफलताको कथा
गायक Elina Garanca: जीवनी, व्यावसायिक गतिविधि
पङ्क्तिबद्ध "सेल्टिक क्रस"
आफ्नो हातले बचेराहरूलाई लागि Brooder। बचेराहरूलाई लागि brooder कसरी बनाउने? बचेराहरूलाई लागि रेखाचित्र brooder
रक्सी "मिन्टो" - फिनल्याण्ड देखि बलियो कुलीन रक्सी
शो हेर्न र अनलाइन हुन सक्छ
म आफ्नो खुट्टा लक्षण मा एक रक्त थक्का कसरी निर्धारण गर्न सक्छन्
को "Maynkraft" मा रंग - इन्कोडिङ
Gatchina: होटल (समीक्षा)
सुन जस्तो माछा हेरविचार र मर्मत
खुरमा आहार। खुरमा को उपयोगी गुणहरू, वजन बढावा